Bogga ugu weyn Waa maxay shatiyada aan u baahanahay si aan u bilaabo ganacsi?
Ma ogtahay in shatiga ganacsigaagu uu ilaalinayo ganacsigaaga oo uu sidoo kale keenayo faa'iido badan?
Lahaanshaha ganacsi ee qarnigan 21-aad waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu quruxda badan ee la qaado iyada oo dunidu ay hadda ku wareegayso iskaa u shaqeysiga iyo xorriyadda.
Si kastaba ha ahaatee, mulkiilaha ganacsi ahaan ama mid suurtagal ah, waa hubaal inaad la macaamili doonto shaqaalaha iyo macaamiisha. Talaabada ugu weyn ee la qaado taas oo keenaysa ilaalin, sirnimo, xitaa aaminaadda ganacsigaaga, waa inaad hesho shatiga ganacsiga.
Maxay muhiim u tahay in la helo shatiga ganacsiga?
Shatiga ganacsigu waa diiwaan gelin ama ogolaansho waajib ku ah in ganacsi la bilaabo waxaana looga baahan yahay dawladaha hoose, wadamada, gobolada iyo dawlada dhexe.
Waa hab sharci ah oo loogu oggolaanayo shakhsiyaadka iyo shirkadaha inay fuliyaan hawlo ganacsi oo ku dhex jira xukunka juqraafi ee dawladda. Ma ogtahay waxa? Dawlada hoose ayaa soo saarta.
Si kastaba ha ahaatee, waa in aad codsatid oo aad heshaa shatiyada iyo rukhsadaha loo baahan yahay ka hor inta aanad samayn waxyaalaha ay kuu ogolaanayaan inaad samayso.
Sidaa darteed, haddii aad tahay milkiile ganacsi ama mid suurtagal ah, ilaalinta shatiga ganacsigu waa lama huraan, sababtoo ah waxaa jirta rumayntan ay keenayso.
Intaa waxaa dheer, waxay ku siinaysaa xorriyadda inaad sameyso wax kasta sababtoo ah waxaad ku kalsoon tahay in dowladdu ay ka warqabto ganacsigaaga.
Waa maxay Shatiga Ganacsiga California?
Haddii aad ku hawlan tahay ganacsi California, waa inaad heshaa ruqsad iibiye. Ku dadaal inaad iibiso ama kiraysato hanti shaqsiyeed oo la taaban karo oo sida caadiga ah ku waajibtay cashuurta iibka haddii lagu iibiyo tafaariiqda.
Immisa ayuu ku kacayaa shatiga ganacsigu?
Qiimaha shatiga ganacsigu wuxuu ku xidhan yahay dhawr arrimood, sida nooca shatiga, goobtaada, khidmadaha habaynta iyo kharashyada soo noqnoqda.
Sidaa darteed, celceliska shatiga ganacsigu wuxuu ku kacayaa meel u dhaxaysa $50 iyo dhawr boqol oo doolar oo lagu daray khidmadaha cusboonaysiinta.
LLC ma la mid tahay shatiga ganacsiga?
Shatiga ganacsigu maaha mid la mid ah LLC (shirkad mas'uuliyad xaddidan leh). LLC waa shirkad ganacsi oo si sharci ah loo aqoonsan yahay halka shatiga ganacsigu uu ku siinayo ogolaansho aad ku gasho nooc ganacsi oo gaar ah oo awood gaar ah leh.
Sideen ku helaa Shatiga Ganacsiga? Tilmaamaha Tallaabo-tallaabo
Sanadihii la soo dhaafay, Tignoolajiyada Macluumaadka ayaa runtii ku horumaraysay casriyeyn kala duwan iyo horumarin joogto ah oo ku saabsan aaladaha sida kumbuyuutarka, aaladaha mobilada iyo wixii la mid ah.
Sidaas awgeed taasi way is beddeshay oo weli beddeshay tignoolajiyadda adduunka halkii ay ahayd oo ay hadda ka taagan tahay.
Xitaa ganacsiga maanta, Tignoolajiyada Macluumaadka ayaa faa'iido u leh samaynta xisaabinta Ganacsiga sida xisaabinta kharashka iyo faa'iidada iyada oo la adeegsanayo xisaabaadka, sidoo kale xayeysiinta, isticmaalka xirmooyinka sawirada kumbuyuutarka iyo wixii la mid ah.
Go'aanso shatiga ganacsiga aad u baahan tahay
U samee dukumeentiyada ganacsi ee ku habboon codsigaaga
Codso shatiga ganacsiga
Qaado shatiga ganacsiga
La soco shuruudaha cusboonaysiinta shatiga
Darawalku safar ma u bixi karaa isaga oo aan haysan liisanka darawalnimada? Maya! Waa maxay sababtu? Sababtu waxa weeye waxa ay soo bandhigaysaa darawalka noocaas ah in uu sharcigu qabto iyo ciqaabo kale.
Tani waa sababta u galitaanka dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ama ganacsiga aan laysanka lahayn waa mid aad khatar u ah, aan lagu talin karin oo xataa ku dhowaad aan suurtagal ahayn.
innagoo leh shatiga ganacsiga runtii muhiimad weyn bay leedahay! Ruqsadaha iyo oggolaanshaha ganacsigaagu u baahan yahay waxay ku xirnaan doonaan meesha aad ku nooshahay iyo nooca warshadaha aad ku jirto.
Tani waa sababta oo ah rukhsadaha iyo shatiga aad u baahan doontaa way u kala duwanaan karaan meel ilaa meel, iyo inta u dhaxaysa warshadaha.
Eeg shatiyada kala duwan ee aad heli karto
#1. Shatiga Ganacsiga Guud
Guud ahaan, ganacsiyadu waxay u baahan yihiin shati ganacsi oo guud si ay ganacsi uga sameeyaan magaalada ama gobolka ay ku yaalaan.
#2. U samaynta ganacsi si shati ama ogolaansho
Haddii aad ganacsigaaga ku waddo magac ganacsi khiyaali ah (sidoo kale loo yaqaan magaca DBA), gobolkaagu waxa uu kaaga baahan karaa inaad diwaangeliso magaca ganacsigaaga.
#3. Lambarka Aqoonsiga Canshuurta Federaalka iyo Gobolka
Ganacsiyada badankoodu waa inay codsadaan EIN-da federaalka, ama lambarka aqoonsiga loo-shaqeeyaha, oo sidoo kale loo yaqaan lambarka aqoonsiga cashuurta.
Gobolkaaga ama dawlada hoose ayaa laga yaabaa inay sidoo kale kaa dalbadaan inaad hesho lambarka aqoonsiga cashuurta gobolka sidoo kale.
#4. Ogolaanshaha canshuurta iibka
Haddii meheraddaadu ay iibiso alaab, ha ahaato khadka tooska ah ama khadka tooska ah, oo gobolkaagu uu kaaga baahan yahay inaad ururiso cashuurta iibka, waxa laga yaabaa inay u baahato inaad hesho ogolaansho ganacsi oo inta badan loo yaqaan ogolaanshaha cashuurta iibka ama ogolaanshaha iibiyaha.
#5. Ogolaanshaha Sooneynta
Xeerarka aagagga maxalliga ah ayaa laga yaabaa inay nidaamiyaan halka noocyada ganacsiyada qaarkood ay ka shaqayn karaan oo aanay ka shaqayn karin. Shuruucdan kuma khuseeyaan meheradaha sida warshadeeyayaasha iyo makhaayadaha.
Waxay kaloo saamayn karaan milkiilaha ganacsiga guriga. Waxa laga yaabaa inaad dalbato kala duwanaansho ama ogolaansho ku-isticmaalka shuruuda ku xidhan haddii aanay aagga aad doonayso inaad ganacsigaaga uga shaqeyso nooca ganacsigaaga.
#6 Ogolaanshaha Joogitaanka Guriga
Ogolaanshaha degenaanshada gurigu wuxuu khuseeyaa ganacsiyada guriga ku salaysan. Haddii aad qorsheyneyso inaad ganacsigaaga ka shaqeyso gurigaaga gudihiisa, ka hubi magaaladaada ama dalkaaga si aad u aragto haddii ogolaansho la'aan guri loo baahan doono.
#7. Shatiyada Xirfadlaha/Shaqada
Noocyada gaarka ah ee ganacsiyada ama ganacsiyada gaar ahaan warshadaha ayaa laga yaabaa inay u baahdaan shatiyo xirfadeed ama xirfad gaar ah. Ganacsiyada ama warshaduhu way ku kala duwanaan doonaan gobol ilaa gobol.
Tusaale ahaan, gobolada qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan ganacsiyada daryeelka ilmaha si ay u helaan shati gaar ah. Xirfadaha sida qareennada iyo xisaabiyeyaasha ayaa sidoo kale inta badan la nidaamiyaa waxaana laga yaabaa inay u baahdaan shatiyo xirfadeed oo gaar ah.
#8. Ogolaanshaha Caafimaadka
Ogolaanshaha caafimaadka. Ganacsiyada qaarkood sida kuwa ku lug leh diyaarinta iyo maaraynta cuntada waxay u baahan karaan ogolaansho caafimaad.
Oggolaanshaha Waaxda Dabdemiska. Meheradaha isticmaala walxaha guban kara, dadweynaha u furan ama ku lug leh dhowr qof oo meel isugu imaanaya waxay u baahan karaan ogolaansho ama kormeer waaxda dab-damiska ee degaankaaga.
#9. Ogolaanshaha deegaanka
Qaar badan oo ka mid ah dawlad-goboleedyada iyo dawladaha hoose waxay u baahan yihiin ganacsiyo gaar ah si ay u helaan oggolaansho gaar ah oo lagu xakameynayo wasakheynta.
Tusaale ahaan, haddii inta aad ku jirto ganacsigaaga aad ku lug yeelan doonto hawlo keenaysa in wasakh deegaanka lagu sii daayo hawada ama biyaha, waxa laga yaabaa inaad hesho ogolaansho gaar ah.
#10. Saxiixa ogolaanshaha
Maamulada hoose qaarkood waxay leeyihiin sharciyo u baahan in ganacsiyada ay helaan ogolaansho ka hor inta aysan calaamadin. Xeerarku waxay sidoo kale qeexi karaan shuruudaha qaarkood sida cabbirka calaamadda iyo halka calaamaddu ku yaallo.
#11. Ogolaanshaha Dhismaha ama Dhismaha
Haddii aad wax isbeddel ah samayn doonto, gaar ahaan isbedel dhismeed, goobta aad ka shaqaynayso ganacsigaaga, waxa laga yaabaa inaad u baahato ogolaanshaha dhisme ama dhisme ee maamulka deegaankaaga.
#12. Shatiga Gobolka Gaarka ah
Gobolo badan ayaa u baahan ganacsiyo gaar ah, sida makhaayadaha iyo xarumaha u adeega khamriga, si ay u helaan shatiyo gaar ah.
Marar badan, shatiyadani waxay muujinayaan in ganacsiga laga hadlayo uu la kulmay heerar gaar ah oo dawladu maamusho.
#13. Ruqsadaha Federaalka Gaarka ah iyo Fasaxyada
Shatiga federaalka ama ogolaanshaha ayaa laga yaabaa in loo baahdo haddii ay ku biiriyaan ganacsigaaga wax kasta oo ay maamusho Hay'ad Federaali ah.
Tusaalooyinka waxaa ka mid ah iibinta ama samaynta khamriga ama hubka, kalluumeysiga ganacsiga iyo hawlaha la xiriira duurjoogta sida soo dejinta ama dhoofinta duurjoogta.
Intee in le'eg ayay shatiyada ganacsigu shaqaynayaan?
Waxay kuxirantahay nooca shatiga. Shatiyada qaarkood waxay u fiican yihiin nolosha ganacsiga halka qof kalena uu yahay inuu cusboonaysiiyo sanad walba kuwa kale ama labadii sanaba mar. Si kastaba ha ahaatee, sharciyadu si isdaba joog ah ayey isu bedeli karaan markaa ganacsiyadu waa inay la socdaan isbeddelada saameeya muddada shatiga.
Intee in le'eg ayay hawsha qaadanaysaa si loo helo shatiga ganacsiga saxda ah?
Waqtiga lagu helo shatiga saxda ah qayb ahaan waxay kuxirantahay awooda shatiga. Wakiilada qaarkood waxay habeeyaan habka ganacsiyada si codsigaaga loo xareeyo si degdeg ah oo si sax ah loo dhamaystiro. Qaar badan oo ka mid ah awoodaha shatiga ayaa si buuxda u diidi doona codsi kasta oo khalad ah ama dukumentiyada taageeraya maqan.
Ganacsi ma yeelan karaa shatiyo badan?
Goobaha qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad ku socodsiiso ganacsiyo badan oo isku mid ah, halka kuwa kalena ay u baahan yihiin shatiyo dheeraad ah ganacsi kasta oo cusub. Mararka qaarkood, nooca ganacsiga aad rabto inaad ku darto shatiga jira ayaa go'aamiya inaad u baahan tahay mid labaad iyo in kale.
Miyaan u baahanahay ruqsadda digniinta dabka ama ogolaanshaha digniinta tuugta meheraddayda?
Qaar badan oo ka mid ah xukunnada maxalliga ah ayaa u baahan milkiilayaasha ganacsiga inay codsadaan oo ay sugaan oggolaanshaha digniinta dabka haddii ay ka shaqayn doonaan goob ganacsi. Ogolaanshaha digniinta dabku wuxuu u oggolaanayaa kormeerayaasha maxalliga ah inay xaqiijiyaan in nidaamka ka hortagga dabka si habboon loo rakibay oo si habsami leh u shaqeeyo.
Waxaan rajeynayaa in qaybahan macluumaadka ee maqaalkani xambaarsan yahay ay kaa caawin doonaan inaad si degdeg ah u go'aansato inaad hesho shatiga ganacsigaaga.
Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Sida Loo Hawl-geliyo Kaarka Debit-ka ee Chase
Sidee buu u shaqeeyaa kaadhka deynta ee Robinhood?
Haddii aad waligaa la yaabtay sida Amazon u socodsiiso malaayiin amarro ah oo si sax ah macaamiisha ugu soo bandhigto alaabada, markaa,…
Sida Loo Bilaabo Meherad New Jersey 2022: Tusaha Tallaabada-Ugu-dambaysa ee Ugu Dambeeya
Aan ku tuso toosan sida ganacsi looga bilaabo New Jersey. Waxaan horey u ogaa in tani ay tahay…
Maalgelinta hantida maguurtada ah waxaa lagu yaqaanaa inay tahay ganacsi faa'iido leh oo weligeed sii kordhaya. Dunidan maanta, hal…
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Socodka Eeyga 2022 | Hagaha Buuxa
Dadku waxay heli karaan madadaalo iyo raynrayn iyagoo samaynaya waxyaalaha ugu yaabka badan waxaa jira ilaa inta ay tahay wax ay…
Sida Loo Bilaabto Ganacsi Indiana 2021: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo